नेविसंघ धादिङअधिवेशन : भिम भट्ट भन्छन् म सबैको साझा उम्मेद्धावार हुँ - Lekbesi Khabar
नेविसंघ धादिङअधिवेशन : भिम भट्ट भन्छन् म सबैको साझा उम्मेद्धावार हुँ
माघ ६, धादिङ । माघ ७ र ८ गते धादिङबेशीमा सम्पन्न हुन लागेको नेविसंघ धादिङको १४ औँ अधिवेशनले धादिङ कांग्रेस र नेविसंघका नेता कार्यकर्ताहरुलाई राम्रैसंग तताएको छ । पटक पटक मिति सर्दै आएको जिल्ला अधिवेशन अब भने हुने पक्का भएको छ । १३ वटा स्थानिय निकाय रहेको धादिङमा नेविसंघले सबै गाउँपालिका र नगरपालीकामा गरिने अधिवेशन सम्पन्न गरेसंगै जिल्ला अधिबेशनको माहोल बनेको हो । जिल्ला अधिवेशनको लागि प्रतिनिधीहरु सदरमुकाम आउने क्रम सुरु भएको छ । नेविसंघको विधान अनुसार चुनीएका ४६० जना जिल्ला प्रतिनिधीहरु अधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागि हुने बताईएको छ ।
यसै बिच अध्यक्ष तथा अन्य पदको लागि आकाङ्क्षीहरु बढ्दै गएका छन् । तिनै आकाङ्क्षीहरु मध्ये अध्यक्ष पदका आकाङ्क्षी भिम भट्टसंग लेकबेशी खबरका सम्पादक प्रमोद भट्टले गरेको कुराकानिको सम्पादीत अंस ।
१.स्वागत छ लेकबेशी खबरको यो बिशेष कुराकानीमा ।
२.नेपाल विद्यार्थी संघ धादिङको १४ र्औ जिल्ला अधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?
सर्वप्रथम प्रस्नका निम्ति लेकबेशी खवरलाइ हार्दिक आभार । हो हामी धादिङका विद्यार्थी साथीहरू यतिबेला नेपाल बिद्यार्थी संघको १४औं अधिवेशनको पुर्वसन्ध्यामा भब्य तयारीका साथ लागेका छौं । १३ वटै गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिबेशन सम्पन्न गरि यही माघ ७ गते भब्य उद्घाटनको सम्पुर्ण तयारी पूरा गरेका छौं ।
३.तपाईले अध्यक्ष पदमा आफ्नो उमेद्धावारी घोषणा गर्नु भएको छ यो उमेद्धावारी किन र केका लागि हो ?
मेरो उम्मेद्धावारी विद्यार्थीहरुको चाहना बमोजिम हो र म स्वत स्वभाविक र साझा उम्मेदवार पनि हुं । संगठनलाई चलायमान र गतिशिल बनाउन, विद्यार्थी हकहितको लागि लड्न र संरक्षण गर्न, शैक्षिक गुणस्तरको वकालत एवम् बिद्यार्थीको समस्याहरु हल गर्नको लागि नै हो ।
४.आफु नै उपयुक्त उमेद्धावार हो भनेर मतदाता विद्यार्थी हरुलाई विश्वास दिलाउने आधार के छन् तपाईसंग ?
बिद्यार्थीहरुको तीब्र चाहनालेनै मैले उम्मेद्धावारी दिएको हुं । बिद्यार्थीहरुको सुखदुःखमा मेरो लामो सहकार्यको अनुभव,साथ, सहयोग तथा मित्रताको ब्यवहार र आजसम्म मैले नेबि संघमा बटुलेको राजनीतिक अनुभव नै उम्मेदवारीको आधार हो । म संगठन निर्माण र विद्यार्थीका शैक्षिक उन्नतिका निम्ति कुनै प्रलोभनसित सहमती गर्दिन भन्ने कुरा मेरो बिगत वर्तमान र भविस्य हो ,यो कुरा अधिकांश बिद्यार्थी साथीहरूलाई जानकारी छ ।
५.तपाईलाईनै विद्यार्थी अध्यक्ष चुन्नु पर्ने कारण ?
म अरु भन्दा पुरानो र अलिबढी राजनीतिक अनुभव बटुलेको मान्छे हो, मसित विद्यार्थीहरुलाइ सद्भाव र सम्मान गर्ने बानी छ,उनिहरुको सुखदुःखमा नजिक हुने लत छ, विद्यार्थीलाई पर्ने कुनै पनि अन्यायसित लड्न सक्ने नीडरता छ, नयाँ खालका शैक्षिक दृष्टिकोण छ, देशलाइ अन्याय वा आपत परे ज्यान उत्सर्ग समेत गर्न सक्ने सङ्कल्प र दृढता छ। त्यसैले बिद्यार्थीहरुले मलाई भोट दिनुहुन्छ ,मलाइ पुर्ण विस्वास छ।
६.पार्टीमा जस्तै नेविसंघमा पनि चुनाव जित्न कुनै गुठको हुनु पर्छ भन्ने सुनिन्छ तपाईलाई क-कस्को सहयोग छ ?
हाम्रो संगठनको यो अधिवेशन पहिलाको तुलनामा निकै फरक र समयको भावना बमोजिम बिधान परिमार्जन भइ अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको मात्र नितान्त अधिबेसन हो,उमेरका र मापदण्डका हिसाबले पनि यो निश्पक्ष, गुटहीन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा रहेर हुन्छ,पार्टीमा अलिअली गुटबन्दी हुने गरे पनि नेबि संघमा यस्को असर पर्दैन । सक्षम मान्छे नै अध्यक्ष हुन्छ । त्यही सबैको एक मत हुन्छ ,कुनै द्विबिधा रहन्न ।
७.नेविसंघ भित्र पदको लागिमात्रै राजनिति गरिन्छ भन्ने आरोप छ नी तपाईहरु माथि ?
नेविसंघले नेपालका धेरै आन्दोलनको मोर्चाहरुमा अतुलनीय योगदान गरेको अविस्मरणीय इतिहास छ, बिगत बिर्सिएर कुरा गर्नु हुदैन, धेरै नेविसंघका साथीहरुको बलिदानी यो लोकतन्त्रका अध्यायहरुमा भेटिन्छन् । राजनीतिमा पद पनि महत्वपूर्ण त हुन्छ नै तर हाम्रो पार्टीमा त्यस्ता उदाहरणहरु प्रसस्त छन, जसले राजनीति जितेर पद परित्याग गरेका छन् । त्यसैले राजनीति पदका लागि मात्र हुदैन परिवर्तनका लागि पनि हुन्छ ।
८.समयको लागि धन्यवाद ।
यस महत्वपुर्ण अवसरका निम्ति लेकबेशी खवर प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
६ माघ २०७५, आईतवार २१:३२ January 21, 2019